Huawei Nova na Nova Plus, Huawei ọhụụ ọhụrụ | Akụkọ akụrụngwa
Huawei aghọwo oge otu n'ime ndị nrụpụta kachasị na ahịa ekwentị mkpanaka, na ihe omume ọ bụla nke ndị nrụpụta China na-eweta atụmanya dị ukwuu. Taa nke emere na IFA dị obere, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-ezute ya ọhụrụ Huawei Nova na Huawei Nova Plus, ekwentị ọhụrụ abụọ ga-abụ akụkụ nke ihe a na-akpọ n'etiti, na a adịchaghị imewe.
Ọtụtụ n’ime anyị tụrụ anya onye ga-anọchi onye nke ọma Huawei Mate S nke e gosipụtara na mbipụta ikpeazụ nke IFA, mana Huawei ekpebiela ịgba nzọ na ọnụahịa ọhụrụ abụọ ahụ, na-ahapụ ọnụahịa ahụ dị ugbu a otu afọ na-enweghị onye ga-anọchi ya ọbụlagodi ugbu a.
1 Huawei doro anya na nzọ na imewe
3 Huawei Nova Gụnyere
5 Huawei mere ya ọzọ
Huawei doro anya na nzọ na imewe
Ihe mbu nke dọbara uche nke Huawei Nova na Huawei Nova Plus bụ nke ha imewe, lebara anya na nke ikpeazụ na nke ahụ anaghị ahụchaghị anya maka enweghị nlele anya. Ngwaọrụ abụọ a na - etu ọnụ maka ihe eji eme ihe eji eme ihe dị elu ma ọ ga - abụrịrị na ha nwere ike ịsị na ha na - ahụkarị ụdị oku dị elu.
Ọdịdị ahụ yiri nke Nexus 6P nke onye nrụpụta China mepụtara maka Google na nke dị ugbu a bụ ihe ndabere maka Huawei Nova ọhụrụ a. Anyị nwekwara ike ịsị na o nwere mmetụ nke Nwunye 8 na-aga nke ọma, nwere nnukwu itinye n'ọrụ n'ihu nke ruru 75%.
N'ikpeazụ, dị ka Huawei n'onwe ya kwadoro, a na-eji dayamọnd eme ihe ndị e ji rụọ ihe maka ngwaọrụ ahụ, ihe ga-eju anya na ọtụtụ.
El Huawei Nova Ọ bụ nke mbụ n'ime ọdụ abụọ nke Huawei gosipụtara taa, ọ nwere ihuenyo 5-anụ ọhịa. Oghere dị warara nke ihuenyo nke naanị 1.8 millimeters na nha ihuenyo ahụ tụnyere ahụ nke smartphone bụ abụọ n'ime njirimara nke ngwaọrụ mkpanaka a.
Na-enweghị ịkwụsị ikwu banyere ihuenyo, anyị ga-ekwusi ike na ọ nwere 443 dpi pixel density na 1500: 1 iche, nke nwere ike ịgwa gị ihe ọ bụla. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị atụnyere ya na ihuenyo iPhone 6s, ọ dị elu karịa 10% karịa nke ekwentị mkpanaaka Apple, nke doro anya bụ ihe ị ga-etinye na akaụntụ.
Ọzọ anyị ga-eme nyocha zuru ezu banyere isi atụmatụ na nkọwa nke Huawei Nova;
5-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD mkpebi na a ihuenyo ọdịiche nke 1500: 1
Octa-isi Snapdragon 650 processor na-agba ọsọ 2GHz
Nchekwa RAM nke 3GB
Nchekwa dị n'ime 32 GB nwere ohere ịgbasa ha site na kaadị microSD nke ruru 128GB
Igwefoto mbụ nwere ihe mmetụta 12 megapixel
Gam akporo 6.0 Marshmallow sistemụ arụmọrụ na Emui 4.1 nhazi akwa
Mkpisiaka agụ enịm ke edem
Batrị 3.020 mAh nke na-ekwe nkwa nnwere onwe dị ukwuu site na ndị nrụpụta China
Banyere Huawei Nova Plus anyị na-ahụ esemokwu dị iche iche ma e jiri ya tụnyere Huawei Nova. Isi biri na ihuenyo ihuenyo na-ebili ruo 5.5 sentimita asatọ na kwa ihe mmetụta nke igwefoto bụ isi, nke ga-enwekwu megapixels nke ga-eme ka anyị nweta foto dị elu.
Ugbu a, anyị ga-enyocha ihe isi atụmatụ na nkọwa nke Huawei Nova Plus a na taa ka egosiputala ya n’ime usoro nke IFA 2016;
5,5-inch ihuenyo na FullHD mkpebi
Octa-isi Snapdragon 650 processor na-agba ọsọ na 2GH
Igwefoto izizi nwere ihe mmetụta 16 megapixel yana ngwa anya ihe eji etinye ihe
Mkpisiaka agụ agụ n'azụ
3.340 mAh batrị
Banyere nnweta nke ngwaọrụ mkpanaka abụọ, Huawei ekwenyela na ha ga-abata n'ahịa ahụ n'ụzọ gọọmentị n'ọnwa Ọktọba, n'ụbọchị a na-ekwenyebeghị, nke a ga-ahapụ n'oge na-adịghị anya.
Ụgwọ nke Huawei Nova achọpụtala 399 euro mgbe Huawei Nova Gụnyere ga-onu ahia di ntakiri elu, si 429 euro. Obere ọdịiche dị n'etiti ọdụ abụọ ahụ bụ ihe iju anya, nke anyị ga-echere iji gosipụta ozugbo ha gosipụtara n'ahịa ahụ n'ụzọ gọọmentị.
Huawei mere ya ọzọ
Ọzọkwa na e nwere ugbua na ọtụtụ Huawei mere ya ọzọ eze ọkọnọ ọhụrụ abụọ mobile ngwaọrụ nwere a emezue imewe, njirimara dị elu na nkọwa, yana ọnụahịa nwere ike ịdị ọnụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akpa ọ bụla.
Obere ntụpọ anyị nwere ike iwepụta Huawei Nova na Huawei Nova Plus, n'agbanyeghị na enweghị ike ịnwale ha ma pịakọta ha ka ha lelee uru niile ndị nrụpụta China kwere anyị nkwa, anyị ga-ekwurịrịrịrị na nke ikpeazụ nke gam akporo Nougat na ahịa Ọ bụ ihe iju anya na Huawei achọghị ịchọta ntakịrị site na ịwụnye ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo. Nke a nwere ike ịbụ ọsọsọ mana na-eche na ha agaghị erute ahịa na ụzọ gọọmentị ruo Ọktọba, echiche ahụ adịghị ka ọ ga-eme. Anyị ga-ahụ ugbua oge ole ngwaọrụ ọhụụ abụọ a ga - eji emelitere gam akporo 7.0.
Huawei emeela ya ọzọ, ihe ekwesiri iche na otu n'ime ndị na-ewu ewu ama ama n'ụwa na ahịa, mana nke ga-akwado ya ịmalite mgbe ịmalitere.
Kedu ihe ị chere maka Huawei Nova na Huawei Nova Plus?. Gwa anyị uche gị na oghere edebere maka ịza ajụjụ na post a ma ọ bụ site na netwọkụ mmekọrịta anyị nọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Huawei Nova na Nova Plus, Huawei ọhụụ ọhụrụ
nke asatọ dijo
Ndewo m abụọ kwesịrị ịgbaso atụmatụ n'ihi na otu yiri ka ọ bụ onye ikwu dị anya nke 6p na nke a Nova na Nova gbakwunyere karịa di ma ọ bụ nwunye 8 bụ nyocha nke onye òtù ọlụlụ 7 na igwefoto na onye na-agụ ya ma n'ama! M chọrọ ịjụ gị ebe ọ bụ na anyị na-ekwu okwu banyere phablet ma ọ bụrụ na ị na-akwado ndị Hyundai ndụ ultra. Ọ nwere ihe nhazi 2ghz mediatek mana nke a ka m chere dị na elu nke snapdragon mid-processors. Enwerem lg g4 ma chọọ imeghari ya mana ọ dabaghị na etiti